Ama-FAQs - iTianjin TheOne Metal Products Co, Ltd.
Okokuqala, khetha umphakeli ongcono kakhulu ongokoqobo ngentengo ephansi
Okwesibili, khulisa amandla okukhiqiza, wehlise izindleko zokukhiqiza,
Okwesithathu, inqubo yokukhiqiza ehlangene, yehlisa izindleko zabasebenzi.
Okulandelayo, Musa ukuchitha isikhala sokupakisha, wehlise izindleko zokuthumela.
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kufaka phakathi Izitifiketi Zempahla, Umbiko Wokuhlola Umkhiqizo, kanye nemibhalo yokuthola imvume yangokwezifiso.
Kumasampula, isikhathi sokuhola siseduze kwezinsuku ezi-2-7. Ngomkhiqizo omningi, isikhathi sokuhola yizinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo yediphozithi. Izikhathi eziholayo ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozithi yakho, futhi (2) sivunywa kokugcina kwemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu eziholayo zingasebenzi ngomnqamulajuqu wakho, sicela uye phezu kwezidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwanelisa izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Ungenza ukukhokha ku-akhawunti yethu yasebhange, iWestern Union, T / T, L / C ngokubona nokunye.
I-30% yediphozithi kusengaphambili, ibhalansi engu-70% ngaphambi kokulethwa
Kuyini ukulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo?
1.Ngaphambi kokukhiqizwa, sihlola zonke izinto ezibonakalayo nezamakhemikhali nezomzimba
Ngenqubo yokukhiqiza, i-QC yethu yenza ukuhlolwa okufika ngesikhathi nokubheka endaweni.
Umkhiqizo ophelile, sizobheka ukubukeka, ubukhulu be-bandwidth *, mahhala futhi kufakwe i-torque nokunye
Ngaphambi kokulethwa, sizothatha izithombe zezimpahla, khona-ke yonke inqubo yokuhlola izogcinwa efayeleni futhi yenze umbiko wokuhlola.
Ukupakisha kwethu okujwayelekile kuyisikhwama sepulasitiki esingaphakathi kanye nebhokisi langaphandle lokuthumela ngepallet.Izovimbela izimpahla ukuthi zingamanzi futhi amabhokisi angonakalisi .Uma futhi unezinye izidingo, uxhumane nathi nge-pls, sizozama ukukusebenzela lokho.